प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको कारण यस्तो , अब के गर्ला समाजवादी ? – Sudarshan Khabar
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको कारण यस्तो , अब के गर्ला समाजवादी ?
यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादीका सांसद हुन्। उनी समाजवादी पार्टीबाट महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित भएका थिए।
समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि केही दिनअघि यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएको आरोप छ।
‘सांसद अपहरण गरेको यो घटना सरकारवादी मुद्दा बन्नुपर्ने हो। कुनै जाहेरी नलिइकन पनि राज्यले नै मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँले जाहरी ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो।
हामी प्रहरीलाई दोषारोपण गर्न चाहँदैनौं। उहाँका बाध्यता छन्। माथिको आदेश छ। देशमा ओलीतन्त्र छ यसले मूल्य मान्यता, विधिविधान, कानुन सबै लत्याएको छ। राज्यको अपराधिकरण गरेको छ।’
समाजवादी र राजपाको दल दर्ता रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी
सत्तारुढ नेकपाको भातृ संगठन युवा संघले संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको एकता प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ।
युवा संघका केन्द्रीय सदस्य अमित लामाले उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उनी तत्कालीन एमाले भातृ संगठन युवा संघको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष थिए।
‘हामीले दुई दलबीचको सहमति पत्रमा बहु राष्ट्रिय राज्य कायम गर्ने उल्लेख भएको र सो व्यवस्था संविधान प्रतिकुल भएको उल्लेख गरेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेका हौँ’, लामाले भने, ‘हाम्रो निवेदन १३९० नंम्बरमा दर्ता भएको छ।’
समाजवादी पार्टीले युवा संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका महेश बस्नेत सहित पूर्व आईजिपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका अर्का सांसद किसान श्रेष्ठ विरुद्ध अपहरणको जाहेरी दिएसँगै दल दर्ता विरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो।
‘नयाँ दलको उद्देश्य नेपालमा बहु राष्ट्रिय राज्य काम गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘छुट्टै देश अर्थ झल्कने गरी दल दर्ता गर्न प्रस्ताव गरिएकाले नेपालको संवधानको धारा २६९ को ५ विपरित प्रस्ताव गरिएकाले उक्त दल दर्ता प्रक्रिया रोकी पाउन यो निवेदन पेश गरेका छौँ।’